August 2018 – TPEC
GAROWE, Puntland- Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta hortagay golaha wakiillada dowladda Puntland iyagoo u gudbiyay warbixin ku saabsan waxqabadkii guddiga mudadii ay joogeen. Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, ku-xigeenkiisa Maxamuud Soofe Xasan iyo xubnaha Guddiga ayaa hortagay Xildhibaanada oo ku guda jira Kalfadhigoodii 41aad ee Dastuuriga ah. Warbixinta …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo warbixin siiyay Barlamanka [Daawo+Sawirro] Read More »
Guddoomiyaha TPEC oo ka warbixiyay safar uu ku tagay Maraykanka
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Puntland ee TPEC oo todobaadkan dib ugu soo laabtay dalka, ayaa guddiga iyo shaqaalaha warbixin ka siiyay safar qaatay in ka badan saddex bilood oo uu ku tagay dalka Maraykanka. Guddoomiye Cabdiraxmaan Diiriye Samatar ayaa sheegay in safarkaas uu kala soo kulmay guulo la taaban karo islamarkaana uu shirar la soo qaatay …
Guddoomiyaha TPEC oo ka warbixiyay safar uu ku tagay Maraykanka Read More »
Tababar usoo xirmay Guddiga iyo Shaqaalaha TPEC
Waxaa maanta magaalada Garowe gaar ahaan hotelka Grand lagu soo gaba gabeeyay tababar guddiga iyo shaqaalaha TPEC u socday muddo shan cisho ah. Tababarkan ayaa lagu baranayay arrimaha doorashooyinka iyo qaabka loo sameeyo codaynta, waxaana bixinaysay hay’adda Safer-world oo wada shaqayn la leh guddiga. TPEC Media tpecmedia@gmail.com